आगामी रणनीति बनाउन कांग्रेस अान्तरीक छलफलमा | Alagdhar
घरसमाचारआगामी रणनीति बनाउन कांग्रेस अान्तरीक छलफलमा
आगामी रणनीति बनाउन कांग्रेस अान्तरीक छलफलमा
काठमाण्डौ। सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले आन्तरीक छलफल थालेको छ । बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा जारी बैठकमा सरकारविरुद्ध घोषित आन्दोलन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारका गतिविधिप्रति असहमति राख्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने, डा. गोविन्द केसीका माग सम्वोधन गर्नुपर्ने, निशेधित क्षेत्र तोक्न नहुने लगायतका माग राख्दै कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको, मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न गरेको साथै संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने जस्ता प्रवृत्ति देखाएको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।
कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले साउन ३, ५ र ८ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्नेसहितका सरकार विरुद्धका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । कांग्रेसले आन्दोलनको घोषण गरेतापनि सरकारी पक्षबाट भने केही प्रतिकृया आएको छैन ।
अघिल्लो लेखमाचलचित्र विकास बोर्डमा दुई अध्यक्ष
अर्को लेखमापर्वतमा पहिरोले घर पुरिँदा १ जनाको मृत्यु ३ जना घाइते